Dhageyso Waxgaradka Sh/hoose Oo Bogaadiyay Weerarkii Bariire. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Waxgaradka Sh/hoose Oo Bogaadiyay Weerarkii Bariire.
September 30, 2017 7:46 pm Views: 208
Afhayeenka Odayaasha Dhaqanka Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelada hoose Nabadoon Muxamed Abuukar Mayow oo wareysi ay la yeelatay Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa ka hadlay weerarkii maalintii shalay ka dhacay deegaanka Bariire ee gobalka Shabeelada hoose.
Nabadoonka ayaa xusay in odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan waxgaradka gobalka ay si weyn usoo dhaweynayaan una bogaadinayaan weerarka lagu xasuuqay maleeshiyaatka Murtadiinta ee ka dhacay deegaanka Bariire.
Sidoo kale Nabadoonka ayaa u duceeyay ciidamada Mujaahidiinta ee fuliyay weerarka waxaana uu ku celceliyay iney si aad ah ugu farxeen weerarkaasi.
gaba gabadii naboon Mayow waxa uu baaq Towbadkeen ah u diray maleeshiyaatka dowlada Ridada isagoona ballan qaaday iney ka ergo geynayaan askari walbo oo kasoo baxa safka Murtadiinta iskuna soo dhiiba Muslimiinta.
Halkan Ka Dhageyso Wareysiga Nabadoon Muxamed Abuukar Mayow.